Canon Scanner Software - MYSTERY ZILLION
July 2010 edited August 2010 in Internet & Email
ချစ်ခင်လေးစားရပါသော နည်းပညာရှင်များ နှင်. အသိပညာရှင်များ ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်ရဲ့ Computer ရှိ Canon Scanner မှာ Driver မရှိ သောကြောင့် အသုံးပြု မရပါ။ Internet မှာ Download လုပ်သော်လည်း အဆင်မပြေပါ။ ဒီဒေသမှာလည်း ဒီ Driver ကို၀ယ်လို့မရပါ။ Download လုပ်ရသော installer_driver_canon_canoscan_lide_20_7_0_3_1_English မှာလည်း မရပါ။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်တော်အား ကူညီပေးကြပါ ခင်ဗျာ။ အရေးတကြီး အသုံးလိုသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ Canon ထုတ် CanoScan LiDE 20 အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်ရဲ့ Computer မှာ Window7တင်ထားပါသည်။ CanoScan LiDE 20 Driver Software နှင့်အတူ ဒီ Scanner အတွက်လိုအပ်သော အခြား Accessories လိုလျှင်လည်း ကူညီပေးကြပါ ခင်ဗျာ။
ညီငယ် Lumanoo လူမာန်ဦး (ခေတ ပူတာအို)
အရေးအသားကြိုက်လို့ ချက်ချင်းရှာပေးလိုက်တယ် . .ဟီး . . (နောက်တာနော်)
လင့်နှစ်ခုပေးလိုက်ပါတယ် . . .အသေးစိတ်ပါလို့ သေချာလုပ်ကြည့်ပါ . . .ရစေမယ်
အောက်ကနေရာမှ သွား download နုုိင်ပါတယ်ခင်ဗျား.. Drivers & Software မှာ နှိပ်ပြီးတော့ ကိုုယ့်ရဲ့ OS အမျိုးအစားရွေးပြီး Download လုုိက်ရုုံပါဘဲ.
ကိုမောင်နှင့် ဘ၀သမား တို့ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရသွားပါပြီဗျာ။ လုံး၀ OK သွားပြီဗျို့။ နည်းပညာရှင် အတတ်ပညာရှင် တို့ရဲ.ကျေးဇူးကြီးမား လှပါတယ်။ Scanner Software ရော Driver ရော အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်။ နောက်နောင်လည်းကူညီကြပါဦး။ ဟဲ ဟဲ ဟဲ ပျော်လို.ပါ။